गुरुड पुराण अनुसार यस्ता व्यक्तिका घरको खाना मुखमा नि हाल्न हुदैन - Sakaratmak Soch
गुरुड पुराण अनुसार यस्ता व्यक्तिका घरको खाना मुखमा नि हाल्न हुदैन
गरुड पुराणमा जीवन र जगतका बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएका छन् । यो १८ पुराणमध्येको एक हो । यसमा २७९ अध्याय र १८ हजार श्लोक छन् । यसको रचना वेदव्यासले गरेका थिए । गरुड पुराणले गर्न हुने र नहुने कुरामा मार्गदर्शन गरेको छ । यसमा कस्ता व्यक्तिले पकाएको खानेकुरा खान उचित हुँदैन भनी उल्लेख गरेको छ । झट्ट सुन्दा त यो सामान्य लाग्छ । तर, यी साना कुराहरुले नै जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ । खाना हाम्रो जीवनसँग जोडिएको कुरा । हामी जे खान्छौं, त्यही बन्छौं । अर्थात हामीले खाएका खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरको कोष निर्माण हुन्छ । हामी कस्तो खान्छौं, कहाँ खान्छौं, कसरी खान्छौं भन्ने कुराले हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिकता दुवैमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।
पुर्खाहरुको मान्यता के छ भने खाना राम्रो भएर मात्र हुँदैन । त्यो कहाँ र कसरी पकाइएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । खाना पकाउँदा त्यसमा सम्पूर्ण ध्यान दिने, खुसीसाथ पकाउने गर्नुपर्छ । खाना पकाउनु पनि आफैंमा एक कला हो । खाना कसरी पकाउँदा स्वादिलो, सुपाच्य हुन्छ ? कसरी यसका पोषक तत्वहरु नष्ट हुँदैनन् ? ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।गरुड पुराणमा भनिएको छ, खराब आचरण भएको, खराब ढंगका, क्रोधित, लोभी व्यक्तिले पकाएको वा उसको भान्सामा पाकेको खानेकुरा सेवन गर्नुहुँदैन ।
लुटेर ल्याइएको खानेकुरा – लुटेर, ठगेर, छलेर, ढाँटेर ल्याएको खानेकुरा छ भने त्यस्ता मान्छेको भान्सामा पाकेको खानेकुरा खानु अनुचित हो । अरुलाई दुःख दिएर, रुवाएर बटुलेको अन्नपानी खाँदा हाम्रो शरीर नै विकारयुक्त हुन्छ । आफ्नो इमान, श्रम, मिहेनतले आर्जन गरेको अन्नपानी मात्र खानुपर्छ । क्रोधित व्यक्तिले पकाएको – खाना पकाइरहेको बेला प्रशन्न र आनन्दित हुनुपर्छ भनिन्छ । क्रोधित व्यक्तिले पकाएको खानेकुरा खान उचित नहुने गरुण पुराणमा उल्लेख छ । क्रोधित एवं रिसाह व्यक्तिले रिसको झोंकमा खानेकुरालाई विषाक्त बनाइदिन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुको हातबाट पाकेको खानेकुरा खान हुँदैन ।
दुष्ट व्यक्ति – अरुलाई दुःख दिने, अरुको पीडामा रमाउने र अरुको कुभलो चिताउने व्यक्तिले पकाएको वा उसको घरमा पाकेको खानेकुरा खान उचित हुँदैन । यस्ता व्यक्ति खराब नियतका हुन्छन् । उनीहरुले तपाईंलाई हार्दिकतापूर्वक खान ख्वाउँदैनन् । कुनै कालो नियत राखेर ख्वाउँछन् । त्यसरी खराब नियत राखेर बनाएको वा दिएको खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि ठिक हुँदैन । कुरा काट्ने व्यक्ति – कतिपय व्यक्ति अरुको कुरा काट्नमा माहिर हुन्छन् । उनहिरुको यो प्रवृत्ति नै हो । अरुको कुरा काटेर उनीहरु मज्जा लिन्छन् ।अरुको कुरा काट्नु भनेको अरुको नकारात्मक, कमजोर पक्ष केलाउनु हो । यस्ता व्यक्तिहरु सधै अरुलाई होच्याएर हेरिरहेका हुन्छन् । यसरी अरुको कुरा काट्ने व्यक्तिहरुले पकाएर कुनै खानेकुरा दिन्छ भने त्यो खानेकुरा खान हुँदैन ।
निर्दयी व्यक्ति – कुनै निर्दयी व्यक्तिले पकाएको वा उनको भान्सामा पाकेको खानेकुरा पनि खान उचित हुँदैन । यस्ता व्यक्ति दोस्रो व्यक्तिप्रति कुनै मानविय भावना राख्दैनन् । सबैलाई कष्ट दिने प्रवृत्तिका हुन्छन् । यस्तो व्यक्तिले पकाएको खानेकुरा खानु हुँदैन । चाकडीबाजको भान्सामा – चाकडी गर्ने व्यक्तिको घरमा पनि खानेकुरा खान उचित नहुने बताइएको छ । यस्ता व्यक्तिले कुनै न कुनै स्वार्थका लागि खाना ख्वाउने व्यवस्था मिलाएका हुनसक्छन् । उनको भान्सामा पाकेको खानेकुरा खानु हुँदैन । रोगी व्यक्ति – कुनैपनि रोगले ग्रस्त व्यक्तिले पकाएको खानेकुरा पनि खान हुँदैन । उनीहरुलाई हेला गरेर वा घृणा गरेर होइन यसो भनिएको होइन । तर, उनीहरुले पकाएको खानेकुराबाट रोग सर्ने भय हुने भएकाले शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उचित हुँदैन ।
दुनियाँले केवल मलाई हासेको देखेको छ तर मेरो भगवानले देखेको छन तर मेरो भगवानले देखेको छन म हाँस्दा हाँस्दै पनि रोएको – मनछुने भनाईहरु
अन्तर्निर्भरता सम्बन्धी भनाइहरू
आँखाको दृष्टि सुधारका लागि अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय